Ama-permalinks anamandla ku-WordPress > UVielhuber David
Ama-permalinks anamandla ku-WordPress07
Uhlelo lwe-WordPress permalink lungashintshwa kahle kakhulu kwizidingo zakho ngosizo lwama- tag wesakhiwo . Isethingi% postname% mhlawumbe isisombululo esivame kakhulu nesisebenzisekayo. Kodwa-ke, uma ufuna ukusebenzisa izixhumanisi zangempela ezinamandla, kufanele uqale wandise uhlelo ngekhodi lakho.
I- API enamandla yokubhala kabusha i- WordPress inikeza izinketho eziningi zokuvumelanisa uhlelo nezidingo zakho. Uma ufuna inkululeko ephelele, i-WordPress ihlelwe ngendlela yokuthi noma yimaphi ama-URL (ananoma yiliphi inani lamazinga) angenzeka. Njengomphumela, isibonelo, ikholi eya ku-
yenziwe. Lokhu kusho ukuthi zonke ezinye izindlela zivulekile ukuhlela i-router yakho bese ukhipha okuqukethwe okuhambisanayo. Ukuze sifeze isimilo esifunekayo, sisebenzisa izenzo ze- "rewrite_tag" ne "rewrite_rule" bese sengeza ikhodi elandelayo kufayela le-works.php lengqikithi esebenzayo:
Kubalulekile-ke ukuthi uphinde ulondoloze izilungiselelo ze-permalink (Amasethingi> Ama-Permalinks> Sebenzisa izinguquko noma, kungenjalo, shayela i- flush_rewrite_rules () isebenze kanye ) ukuze imithetho emisha isebenze. Ekugcineni, sakha ikhasi elisha nge-permalink "ukubhala kabusha" kanye nesifanekiso "ikhasi lokubhala kabusha", okufanele liqale lenziwe kusetshenziswa ifayili elilandelayo:
Ekucushweni okujwayelekile, wonke ama-URL ayatholakala. Ukuhlukahluka kwe- $ base nakho kungahlonyelwa nganoma yimaphi amafolda angaphansi asesidlekeni: Inani le- "pop / up", ngokwesibonelo, lenza i-URL itholakale
Onke amanye ama-URL awathinteki - lawa acutshungulwa yiWordPress njengenjwayelo.